Rugta Ganacsiga & culimada diinta ee Puntland oo wada olole agab dhaqaale loogu ururinayo dadkii ku cayroobay dabkii suuqa Bossaso – Radio Daljir
Febraayo 20, 2012 12:00 b 0
Bosaso,Feb 19 -Rugta ganacsiga iyo warshadaha Puntland ayaa sheegtay inay meel wanaagsan ay marayso howlo lacago loo uruurinayo dadkii ku ceyroobay dabkii ka kacay suuqa wayn ee magaalada Boosaaso horaantii bishii December ee sanadkii 2011kii.
Gudoomiye kuxigeenka Rugta ganacsiga Puntland Maxamed Caydiid Jaamac oo maanta u waramay Radio Daljir ayaa waxaa uu sheegay rugtooda oo kaashanaysa culimaa’udiinka Puntland inay kulamo kale duwan ay la qaateen howlwadeenada shirkadaha ganacsiga inay kusoo aruuriyeen lixdan kun oo doolarka Maraykanka ah.
Waxaa uu sheegay lacagahan inaysan ahayn mid kabi karta baahida dadkii ku ceyroobay dabkii baabi’iyay suuqii waynaa ee magaalada Boosaaso,oo ay rugta ganacsigu ku qiimaysay 15-Milyan oo doolar.
Gudoomiyaha ayaa xusay inay jiraan balanqaadyo ay ka heleen shirkadaha ganacsiga ee Puntland iyo jaaliyadaha dibadda ayna rajaynayaan marka ay soo gaarto lacagaha loo balanqaaday inay gaarsiin doonaan dadkii loogu talla galay,iyadoo muhiimdda lacag bixintuna ay tahay mid ku salaysnaan doonto sida ay dadkii ceyroobay u kala baahi badanyihiin.
Baahin: Axad, Feb 19, Jaamac Cabdiraxmaan ~ Daljir ~ Galkacyo. Matt Baugh, safiirka Britain ee Somaliya oo tafaasiil ka bixiyey ajandaha shirka London; Wafti ka socda Norway oo kulamo kula yeeshay Muqdisho madaxda dawlada federaalka; Rugta ganacsiga Puntland oo wada olole agab dhaqaale loogu ururinayo dadkii ku cayroobay dabkii suuqa Bossaso.